Plus Size Oo Lagu Eedeeyay Turka Cuntada Ah Dharka Dhar Leh Leh - Dhaqdhaqaaqa
Plus Size Oo Lagu Xayuubiyay Turka Cajiibka Dharka Dhar Leh Leh
$ 59.20 $ 74.00 Waxaad kaydisaa 20% ($ 14.80)
Grey / S Gray / M Gray / L Gray / XL Gray / XXL Gray / XXXL Gray / 4XL Gray / 5XL Black / S Black / M Black / L Black / XL Dub / XXL Madow / XXXL Black / 4XL Black / 5XL Red / S Red / M Red / L Red / XL Red / XXL Red / XXXL Red / 4XL Red / 5XL
Qalabka jilicsan iyo dharka dheer ee dharka dharka dharka ee aadka u weyn ayaa raaxo u leh hawlahaaga xafiisyada, maalmaha dukaameysiga ama habeenkii filimka ah ee guriga dhexdiisa.
Qoorta xirxiran qoorta ayaa ku habboon kuwa jecel inay xirto qaybo cadeyn ah oo leh naqshadeeyayaasha xagjirnimada. Xiro xayeysiiskaaga suunka ama suumanka si aad u sameysid gurigaaga maalinta xitaa xiiso badan.
Waxaa laga heli karaa guduudka guduudan, casaan iyo madow, iyo qiyaasta S ilaa 6xl, tani waa mid aad u weyn oo dhar dhar dhaadheer leh oo ku habboon haweenka oo dhan. Isku qas oo la barbardhig alaabtaada kale ee aad jeceshahay inaad dharka u sameyso khibrad aad u xiiso badan.
Sare Length (cm): Full
Calaamadaynta Abstract White iyo Blue Dharka la seexdo $ 53.40 $ 89.00